Fanavaozana ny andro Xetox Challenge - Fialana amin'ny fitafy
Home » Keto » Xetoom Day Review Keto Challenge
The Xetox Day Challenge dia drafitra fisakafoanana vaovao noforonin'ilay mpanoratra amidy indrindra sy mpahay sakafo voatanisa CISSN, Joel Marion. Izy io dia iray amin'ireo drafitra fihinana ketôgôgy miavaka indrindra izay mety ho hitanao amin'ny Internet. Ity drafitra fisakafoanana vaovao ity dia hampavitrika ny vatanao ary hamadika azy io ho milina mandoro tavy ao anatin'ny 2 herinandro. Ity drafitra vaovao ity dia mampihena ny fihinanana gliosida ary mampitombo ny haavon'ny tavy sariaka ao amin'ny vatan'ny olona iray. Amin'ity drafitra vaovao ity dia hianaranao momba ny vondrona manokana «matavy be» ary ny fomba hanampian'ireo tavy ireo anao handatsaka kilao mihoatra ny 14 andro. Ny sasany amin'ireny sakafo antsoina hoe "matavy be" ireny dia ahitana ny tiana toy ny bacon, dibera, hena mena matavy ary atody atody. Ity fanamby vaovao 14 andro ity dia tsy misy ifandraisany amin'i Atkins ary tsy mitovy amin'ny drafitry ny sakafo ketogenika nentim-paharazana izany.
Ny sakafo keto nentim-paharazana dia mitarika amin'ny dingana antsoina hoe ketosis. Ketosis dia fanjakana metabolika miavaka amin'ny alàlan'ny fisondrotan'ny vatan'ny ketônina ao amin'ny vatan'ny vatana. Amin'ny alàlan'ny fampihenana tanteraka ny fihinanana karbôzinao, sy ny fanoloana ireo karbôtô ireo amin'ny karazana tavy sariaka, ny sakafo keto nentim-paharazana dia hanery ny vatanao hamokatra ketones ho an'ny solika izay ahafahan'ny vatanao mandoro tavy ho an'ny angovo. Toa tsara ve? Misy lafy ratsy lehibe aterak'izany… ary zavatra izay atahoran'ny olona alohan'ny hanombohany drafitra sakafo keto. Izy io dia antsoina hoe gripa Keto.
Inona no atao hoe Gripo Keto?
Ny gripa keto dia teny iray ampiasaina hamaritana ireo soritr'aretina toy ny gripa mifandraika amin'ny fanombohana ny drafitry ny sakafo ketogenika tena ambany karbôbika. Miaraka amin'ny gripa keto, ny olona iray dia mety hiaina olana goavana ao anatin'izany ny tsy fahitan-tory, ny fitohanana, ny olana amin'ny fandevonan-kanina, ny aretin'andoha, ny harerahana hozatra ary ny tsy fahampian'ny mineraly. Miaraka amin'ny Xetox Day Challenge tsy mila miahiahy momba ny fiatrehana ireo loza ateraky ny gripa Keto ianao. Ny lafiny ratsy iray hafa amin'ny sakafo keto nentim-paharazana dia indraindray mety maharitra iray volana ny olona iray vao miditra ketosis "tena izy". Na dia misy antony iray aza mahatonga ny vatanao hiditra ketosis ao anatin'ny herinandro, ny olana lehibe indrindra ankoatry ny gripa keto dia ny drafitra keto nentim-paharazana fa tsy miovaova ary tsy azo tanterahina ny hoe ao anaty ketosis maharitra mandritra ny fotoana maharitra. Ankoatry ny tsy maha-zava-misy azy, ny fanjakana ketosis maharitra dia tsy salama amin'ny vatanao mandritra ny fotoana maharitra.
Ny drafitra fisakafoanana 14 Day Keto Challenge no vahaolana tsara indrindra amin'ny sakafo keto nentim-paharazana. Ny vatanao dia afaka mamokatra ketones, ary tsy handalo ketosis ianao. Eny, henonao izany marina…. Mbola handray ihany ianao ALL ny tombony mahavariana amin'ny vatanao mamokatra ketônina TSY Tena misy ketosis tena izy.
Amin'ny drafi-pisakafoanana keto nentim-paharazana, ny metabolisma dia mety manomboka miadana ao anatin'ny 7-10 andro noho ny tsy fisian'ny glucose ao amin'ny tsy fihinana karbaona. Izany dia hiteraka olana amin'ireo hormonina tompon'andraikitra amin'ny fandoroana tavy. Ny vahaolana amin'ity olana ity dia ny fihinanana «carb keto» amin'ny fotoana mety. Ity dia rakotra amin'ny antsipiriany ao amin'ny drafitry ny sakafo 14 Keto Challenge! Amin'ity drafitra fisakafoanana ity dia ho hitanao ny marina momba ny fomba ahafahan'ny “keto carbs” mampifandanja sy manatsara ny hormonina ho mandoro tavy soa aman-tsara.
BENEFITS amin'ny fampiasana ny andro 14 KETO OLANA:
Mila mihinana gliosida miorina amin'ny keto ianao mba hitazomana sy hanatsarana ny metabolisma. Ny sasany amin'ireo tombontsoa azo avy amin'ny fampiasana an'ity fanamby keto 14 andro ity dia misy:
- Ny vatan'ny mpampiasa iray dia handoro amin'ny fomba mandaitra ny glucose betsaka hita ao anaty gliosida. Io dia ahafahan'ny aty manomboka ny famokarana ketones afresh.
- Hanomboka hilatsaka ny hormonina matavy kibo aka ny haavon'ny kortisol anao.
- Ny fihary tiroida voafehy tsara (tompon'andraikitra amin'ny metabolisma anao)
- Mihabetsaka ny angovo
- Tsy misy intsony ny fiatrehana ny tsy fahaizana mifantoka
- Fanatsarana ny tahan'ny insuline izay hitarika ny fihenan'ny tavy ao amin'ny vatana
- Ity rafi-pisakafoanana mifototra amin'ny keto ity dia tsy manana gripa keto izay iainan'ny mpampiasa sakafo keto nentim-paharazana. Afaka mankafy ny fiovana vaovao amin'ny vatanao ianao fa tsy misy "effets keto" manimba
- Ny sakafo dia mamela ny vatana hanova ny tavy voatahiry ho angovo. Ny fihenan'ny tavy dia tsy voatery handalo ny fizotran'ny ketosis.
- Ny fihinanana keto fanamby 14 andro dia ahafahanao mihinana sy mankafy ny sakafo tianao indrindra. Tsy mila mametra ny tenanao amin'ny sakafo karbaona be ianao rehefa ao anatin'ny dingana famokarana ketone ny vatanao.
NAHOANA ISIKA NO NANADIDINA NY KOLONTSAINA AMIN'NY ANDRO XENOMETSY:
Ity drafi-pihariana 14 andro ity dia manome tombontsoa be dia be ao anatin'ny fotoana fohy. Tsy mila mifantoka amin'ny sakafo keto mandritra ny androm-piainana ianao. Ny sasany amin'ireo antony ahafahanao manapa-kevitra ny hampiasa ity sakafo ity ho an'ny vokatra tsaratsara kokoa sy haingana dia:
- Ho afaka mankafy ny loharano proteinina matavy tianao indrindra ianao, raha mbola mifantina hena voapaika tsara.
- Afaka mankafy ny sakafon-karbaona ankafizinao indrindra ianao raha mbola mampiditra "karbaona keto". Anisan'izany ny fihinanana voankazo! Ianao kosa dia mila mahafantatra ny fotoana mety hihinanana an'ity sakafo ity hanatsarana ny fahaizanao mandoro tavy izay zavatra fonosin'ity fampianarana ity tanteraka.
- Ity drafitra mifototra keto 14 andro ity dia tsy misy vokany maharitra izay mametra ny fahaizanao. Tsy mitovy amin'ny sakafo keto nentim-paharazana izay misy vokany be io.
- Ity drafitra ity dia hanampy anao hanana hozatra mahia
- Azonao atao ny misintona ity toro-lalana ity eo noho eo satria misy amin'ny endrika PDF izy io mba hahafahanao manomboka eo noho eo
- Afaka mankafy ireo zava-pisotro misy alikaola ankafizinao ianao amin'ny fisorohana ny alikaola izay mampitombo ny fitehirizana tavy ary misy siramamy be loatra. Ity drafitra 14 andro ity dia manambara izay zava-pisotro misy alikaola azonao sotroina
- Mora ampiasaina noho ny "fomba fiasa keto lasibatra"
- Azonao atao ny mankafy ny fitsaboana tianao indrindra indray mandeha isan-kerinandro nefa tsy mahazo tavy raha vao azonao tsara ny fomba fiasan'ity keto kendrena ity
- Ity drafitra ity dia mora ny manaraka fotoana maharitra ary misy mineraly, otrikaina ary akora izay misoroka ny tsy fahampiana mahazatra amin'ny sakafo keto mahazatra
- Raha tsy afa-po amin'ny lafiny rehetra ianao, dia tonga io fanamby 14 Andro io izay manome antoka feno 60 andro ka tsy misy very!
Mihevitra izahay fa ity drafitra ity dia lehibe ary safidy tsara kokoa ho an'ny vatanao ny fotoana maharitra. Raha efa niomana ny handeha keto ianao na rahoviana, dia aoka ho azo antoka jereo izao ity Xetox Challenge Day Keto voalohany satria tsy dia atahorana loatra izany ary mbola manome antoka ny valiny! Raha manafatra anio ianao dia hahazo fanomezana bonus 4 MAIMAIMPOANA amin'ny baikonao! Hahazo ebook bonus 4 ianao izay misy torolàlana fanatanjahan-tena, tsakitsaky keto ary hacks, torolàlana momba ny hosoka ary ilay drafitra fifadian-kanina miserana.
Tehirizo ny fanapaha-kevitra momba ny fahasalamanao sy ny taonanao amin'ny Savings.Com